Wararkii ugu dambeeyay gulufka Ruushka ee dalka Ukraine | Universal Somali TV
Ciidamada Ruushka ayaa sii xoojinaya gulufka ballaaran ee ay ka wadaan bariga dalkaasi, iyadoo dhanka kalena ay korodhay tirada maalinlaha ah ee Ciidamada Ukraine uga dhimata dagaalka.
Isku celcelis ahaan, Ciidamada Ukraine ayaa la fahamsan yahay inay dagaalka ku waayaan shan boqol (5,00) oo askari, maalintii, waana xilli meelaha qaarkood ay sii yaraaneyso iska caabinta ay kala hortaggayaan Militariga Ruushka.
Ruushka ayaa haatan u muuqdo mid cudud xoog leh ku wajahaya magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Lysychansk, ka dib markii ay u soo baxday inaanu jirin culeys xilligan ka haysta dhanka magaalada deriska la ah magaaladaasi ee Severodonetsk, taas oo horaan ay inteeda badan Ciidamada Ruushka la wareegeen.
Gudoomiyaha Gobolka Luhansk, Serhiy Haidai ayaa Arbacadan sheegay in Ciidamada Ruushka ay haatan beegsanayaan Saldhigyada Booliska, Xarumaha Gobolka iyo Xeer Ilaalinta.
Oleksiy Arestovych oo ah La taliyaha Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in Magaalooyinka Severodonetsk iyo Lysychansk ay qarka u saaran yihiin inay ka go'aan dalka intiisa kale.
Dhanka kale colaadda ayaa ku sii fideysa goobaha danta guud ee Gobolada Koonfurta iyo Bariga Ukraine, sida isbitaalada oo kale, iyadoona ay kordheyso waxyeelada rayidka, taasoo ay ugu wacan tahay duqaymaha har iyo habeen ee Moscow.
Dacwad Oogaha Guud ee Ukraine, haweeneyda lagu magacaabo Irina Venediktova oo hoggaamineyso baaritaanada la xiriira dembiyada dagaal ee Ruushku ka gaysanayo dalkaasi ayaa sheegtay inay diiwaangeliyeen 16,000 oo dembiyo dagaal ah oo Ruushku ka gaystay Ukraine, tan iyo markii uu duulaanku bilowday, muddo afar bilood ku siman.
Moscow waxay marar badan dafirtay inay ciidamadeedu bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah.
Sida Qaramada Midoobey ay dhawaan sheegtay waxaa colaadda Ukraine ku barakacay in ka badan saddex iyo toban milyan oo qof.
Kan-xigaRuushka oo dib u soo cusbooneysiiyay ...
Kan-horeTurkiga iyo Sacuudiga oo hagaajinaya ...
Midowga Yurub oo sheegay in la iibsan karo galeyda uu Ruushku dhoofiyo
65,221,040 unique visits